खोटाङको बराहपोखरीमा पाइने दुर्लभ रातो माछा धमाधम म-र्न थाले – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/खोटाङको बराहपोखरीमा पाइने दुर्लभ रातो माछा धमाधम म-र्न थाले
खोटाङको बराहपोखरीमा पाइने दुर्लभ रातो माछा धमाधम म-र्न थाले
खोटाङ, १२ जेठ – धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल खोटाङको बराहपोखरीमा पाइने रातो माछा म-र्न थालेपछि यसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने बराहपोखरीमा पाइने दुर्लभ रातो माछा पछिल्लो समय दैनिकजसो मर्न थालेपछि यसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको हो ।
बराहपोखरीमा गत तीन÷चार महिनादेखि दैनिकजसो माछा मरिरहेको पाउने गरिएको स्थानीय बासिन्दा एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का युवा नेता निश्चल खड्काले बताउनुभयो । “यसअघिसम्म पोखरीमा टाढाबाटै राताम्य खेलिरहेको रातो माछा देखिने गरेकामा अहिले मरेको माछा तैरिरहेको भेटिने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय दैनिक दुई÷चारवटा माछा मरेर पोखरीमाथि तैरिरहेको भेटिए पनि अहिलेसम्म रातो माछा मर्नुको कारण पत्ता लागेको छैन ।”
मुहान र निकास नदेखिने खुर्पा आकारको पोखरीमा पछिल्लो समय बढ्दो फोहरमैलाका कारण रातो माछा मर्न थालेको स्थानीय बासिन्दाको दाबी छ । पोखरीमा स्थानीय बासिन्दाले नुहाउने र लुगा धुने गर्दा बढेको फोहरमैला र साबुनको असरका कारण रातो माछा मरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरीका वडाध्यक्ष टङ्क मगरले बताउनुभयो ।
पोखरीको पानी कम हुँदै जाँदा र पानीमा जैविक पदार्थको मात्रा बढ्दै जाँदा माछालाई ढुसीजन्य सङ्क्रमण हुने र फुल्का कुहिने रोग लागेर मर्न थालेको हुन सक्ने माछासम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन् । पोखरीको सरसफाइमा ध्यान नपुग्दा फोहरका कारण अक्सिजन कमी हुँदासमेत माछालाई असर पुगेको माछा विज्ञको बुझाइ छ ।
जिल्लाको एकमात्र ठाउँ बराहपोखरीमा पाइने रातो माछा सुनकोशीबाट बथानका बथान आउने पानी हाँसले समेत खाने गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । बिहानपख सुनकोशीबाट बथान नै उडेर आउने हाँसको पञ्जाबाट उम्किए पनि हाँस ठुँगेको चोटका कारण पनि माछा मर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
दुर्लभ रातो माछा संरक्षण गर्न स्थानीय बासिन्दाले हाँस धपाउने प्रयास गरे पनि पर्याप्त हुन नसकेको वडाध्यक्ष मगरले बताउनुभयो । पानी आउने मुहान र निकास हुने स्थान नदेखिए पनि बाह्रै महिना टम्म पानी हुनु बराहपोखरीको विशेषता हो ।
परापूर्वकालमा स्थानीय १२ घर मगरबस्ती डुबेर पोखरी बनेको भन्ने कथनका साथ बराहपोखरी नाम रहेको इतिहास छ । ३३० मिटर लम्बाइ र २१० मिटर चौडाइमा फैलिएको बराहपोखरीमा रातो माछा नासिने चिन्तामा स्थानीयवासी छन् । जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न सकिने भए पनि विकास, संरक्षण र संवद्र्धनको अभावमा बराहपोखरी ओझेलमा परेको छ ।
बराहपोखरीको दक्षिणपट्टि अवस्थित बराहमाई र शंङ्ेश्वरको पूजा आराधना गरेमा चिताएको कुरा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ । चारैतिर जङ्गलले घेरिएरबीच भागमा बनेको बराहपोखरीमा जीवनमा शान्ति मिलोस् भन्ने अपेक्षासहित जोडी परेवा उडाउनुका साथै शुद्धताका लागि नुहाएर पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
हरिबोधनी एकादसी, रामनवमी, शिवरात्रि, बालाचतुर्दशी र माघे सङ्क्रान्तिमा ठूलो मेला लाग्ने बराहपोखरीको पानीमा नुहाए मोक्ष पाउने विश्वासका साथ नुहाउने गरिन्छ । विवाह गरेको लामो समयसम्म सन्तान नभएका जोडीले पूजा आराधना गरेमा सन्तान पाइनेसमेत जनविश्वास रहिआएको छ ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल बराहपोखरीको जग्गा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गर्नेक्रमसमेत बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखि बराहपोखरीको नाममा रहेको सयौँ रोपनी जग्गा पछिल्लो समय स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरेर घर तथा टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् ।(रासस)
बाँकेका २१ जनाले जिते कोरोना, फूलमाला र खादा ओढाएर अस्पतालबाट बिदाइ
भारत लाई “पछार्दै” चीन सरकारले अचानक गर्‍यो एस्तो घोषणा, नेपालभरी खुशीयाली !! पुरा पढ्नुहोस…
चर्चित टिकटक कलाकार निशा गुरागाईको बाहिरियो यस्तो भिडियो
कोरोना संक्रमितमा अर्को नयाँ लक्षण देखा पर्यो! (कस्तो लक्षण हो जानिराखौ)
मूल्य अनुसारको फिचर छानेर RTR 160 4V किन्न पाइने, भोलिबाट ३ नयाँ भेरियन्टको बिक्री सुरु हुँदै